Wax Badan Ka Barro Dhowr Arrimood oo Kamid ah Mucjisooyinkii Rasuulkeena Suuban SCW. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Wax Badan Ka Barro Dhowr Arrimood oo Kamid ah Mucjisooyinkii Rasuulkeena Suuban SCW.
Published: December 16, 2016, 7:17 pm
Mucjisooyinka Nabiga CSW, waxaa ka mid ahaa:-
Maalintii Badar markii Dagaalka la is hor yimid Muslimiinta waxaa u Khudbeeyay Nabiga CSW, Gaaladana Cutba Binu Rabiica, Abuu Jahal waa la wada Raadinaayey oo Indhaha ayaa laga buuxsaday, Gaaladana markey arkeen in Indhaha lagu haayo Dharka ayey ka beddeleen.
Dharkii lagu arkay waa laga bixiyey Ninkii loo geliyeyna waxaa dilay sayidinaa Cali, haddana waa laga bixiyey Ninki loo geliyey waxaa dilay Xamza Binu Cabdil Mudalib, Ninkii Saddexaad ee loo geliyeyna waxaa dilay Sacad Bin Abii Waqaas, sidaas ayaa loo wada Dil dilaayey Gaalada.
Sayid Xamza wuxuu yiri waxaa ii yimid Cunug Dhalinyaro ah wuxuuna igu yiri:- Adeerow aaway Abuu Jahal i tus. Waxaan ku iri Wiilkii:- Maxaad ku Sameeneysaa?, Wuxuu dhahay Hooyadeey ayaa ii sheegtay inuu Nabiga CSW neceb yahay waan Dilaaya Isha ii saar, Xamza ayaa yiri:- Waa kaas Ninka Feeraha weyn waaye.
Inyar ka dib haddana waxaa u yimid Cunug oo Cunugii hore u eg, wuxuna yiri:- Adeer i tus Abuu Jahal, Xamza ayaa ku yiri:- Sidee yeeleysaa?. Wiilkii baa yiri:- Waan Dilaayaa ee i tus, Hooyadey ayaa ii sheegtay inuu Nabiga CSW, uu Neceb yahay, Qofkii Nabiga Neceb ayaan Duulaan ku nahay.
Hooyadas waxaa la Dhahaayey Cafraa, waxey Wiilasheeda tusi jirtay oo ku Barbaarisay Abuu Jahal inuu Nabiga CSW, Neceb yahay. markaas ayey Wiilashii soo Weerartameen, Macuud iyo Mucaad ayaa la kala Dhahaayey, iyaga ayaana Abuu Jahal dilay, Cabdulaahi Binu Mascuudna wuu Dhameys tiray.
Wiilashi mid ka mid ah ayaa Abuu Jahal Seef Lugta kaga Dhuftay, Wiilkiina Abuu jahal Wiilkiisa Cikrama ayaa garabka kaga Dhuftay Seef, wey ka Raaraacsantay, xooga markuu ku Dagaalamay, Gacanti ka Raaracsaneyd ayuu iska Fujiyey.
Haddaba, Markuu Dagaalka Dhamaaday ayuu Nabiga CSW, u yimid isagoo Gacantiisa wata, wuxuu yiri:- Rasuulki Alloow waa tanaa Gacanteyda Abuu Jahal Wiilkiisa ayaa iga gooyey, Anigana Abuu Jahal ayaan Dilay, Nabiga CSW, Gacanti ayuu ka qabtay, sidii markii hore ay aheyd ayuu ka dhigay oo wuu Toosiyey, ka dib ayuu Salaaxay.
فعادت كما كانت أولا
Waxey noqotay sidii markii hore ay aheyd.
(ALOOW SHAFEECADA RASUULKA NA SII).
Subxaanalaah Sida Ay u Ekaanayso Nolosha Qabrigu? Nicmada iyo Cadaabka Qabriga!!
Sheeko Gaaban:- Muxuu Sameeyay Libaaxii Hurdada Dhexda U Mareysay Ee Doolliga Uu Uyimid..